Kambani yedu, NINGBO BOLT MACHINERY EHEMA & COCHNOLOGY CO., Ltd inyanzvi yekugadzira muChina inoridza kugadzira airbrush, mini air Compressors, spray pfuti, air brush kit uye zvimwe zvekushandisa zvemhepo.
Mukati merimwe 15years dzeruzivo mumutsara uyu, ikozvino tiri kutumira kunze kwenyika kune nyika yose.
Iyo fekitori inovhara nzvimbo ye 20,000 ㎡ nyika, inoumbwa nevashandi vehunyanzvi pamwe chete nekugadzirwa kwepamberi uye zvishandiso zvakanaka zvekuedza. Tiri kupa yakakwira mhando zvinhu nemakwikwi mutengo uye nemwoyo wose basa.
Kune 88 vashandi mufekitori yedu, huwandu hwedu ndi30,000 seti yekugadzira system uye 50,000pcs yem airburhs uye 30,000pcs ye mini air compressor yakazara.
Iyo kambani iri mune yakakurumbira seaport guta - Ningbo. Zvigadzirwa zvedu zvinotenderwa neEC & GS maitiro uye kuwana akawanda zvigadzirwa patents. Zvigadzirwa zvedu zvakanyatsokodzera Airbrush kuturika, tatoo, gadzira-up, airbrush t-shati, dhizaini yekugadzira, kushambadzira kupuruzira, nezvimwewo.